လူ​ငယ်​​တွေထက်​ ပိုလန်းပြီး​ခေတ်​မီတဲ့ ချစ်စရာ့​​အ​ဂေါ်ဆုံးဖိုးဖိုးများ - CantWait2Say
လူ​ငယ်​​တွေထက်​ ပိုလန်းပြီး​ခေတ်​မီတဲ့ ချစ်စရာ့​​အ​ဂေါ်ဆုံးဖိုးဖိုးများ
Pandagyi No Comments
​မြေး​တွေကို တုန်​​နေချစ်​တတ်​တဲ့သူ ဖိုးဖိုးဖွားဖွား​တွေဟာ ချစ်​​မေတ္တာနဲ့ ပြည့်​ဝတဲ့လူကြီး​တွေဖြစ်​ရုံမက တဖက်​မှာလည်း လူ​ငယ်​​တွေထက်​ ပိုပြီးလန်းပြီး​ခေတ်​မီတဲ့ အ​ဂေါ်ဆုံးဖိုးဖိုး​တွေလည်းရှိ​နေပါတယ်​။ စိတ်​ပျိုကိုယ်​နုဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အသက်​ကြီးလာလဲမပျက်​စီးဘဲ စိတ်​ကိုကိုယ်​ပါအ​ပေါ့ပါးဆုံး၊ အလန်းဆန်းဆုံးနဲ့ ဘဝကိုဖြတ်​သန်း​နေတဲ့ ချစ်​စရာဖိုးဖိုး​တွေအ​ကြောင်း ကြည့်​လိုက်​ရ​အောင်​လား။
ဒီဖိုးဖိုးက အမူအရာအိုက်​တင်​မျိုးနဲ့ ​ဂေါ်​နေတာကိုမြင်​​တွေ့ရတာဆို​တော့ သူဘာများလုပ်​​နေတယ် ​ထင်​ပါသလဲ? ချစ်​စရာဖိုးဖိုးက ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ခ်​​အ​ကောင့်​​ပေါ်မှာ တင်​ဖို့ ဆဲလ်​ဖီဆွဲ​နေတာပါတဲ့ဗျာ။
တ​လောကလုံး ​ကြောက်​​နေ​ပေမဲ့လည်း မ​ကြောက်​တတ်​တဲ့ဖိုးဖိုးက နည်းနည်းမှကု​မတုန်​လှုပ်​ပါဘူး။ သူ့အတွက်​​တော့ ဒီ​လောက်​သည်းထိတ်​ရင်ဖို့ဆိုတာ က​လေးကစား​လောက်​သာဖြစ်​​နေပုံပါ။
လင်းနို့လူသားရုပ်​ရှင်​ဖြစ်​တဲ့ Dark Knight Rises ကို ကြည့်​ပြီးတဲ့​နောက်​မှာ အဖိုးဖြစ်​သူဟာ သူ့​မြေးဖြစ်​သူဆီ ပို့​ပေးခဲ့တဲ့ ဓာတ်​ပုံပါတဲ့။ ​ခေတ်​မီပြီး ​ဂေါ်လွန်းတဲ့ဖိုးဖိုးဖြစ်​ပါတယ်​။
အခုမြင်​​နေရတဲ့ ဖိုးဖိုးက​တော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်​က ဗုံးကြဲ​လေယာဉ်​မှာ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ခဲ့သူပါ။ အသက်​ ၉၅ ခုနှစ်​အရွယ်​အထိ သူက အ​ကြောက်​အလန့်​မရှိ ​လေထဲပျံသန်း​နေဆဲဖြစ်​တာကို အားကျဖွယ်​မြင်​​တွေ့ရမှာပါ။
ဖိုးဖိုးက ပင်​စင်​အိမ်​ရာမှာသွား​နေ​နေတာ​လေ။ သူ​ရောက်​​ရောက်​ချင်းမှာပဲ ​မှော်​အစွမ်းနဲ့မည်​သို့မည်​ပုံလုပ်​လိုက်​သည်​မသိ… အနားမှာဝိုင်းဝို​င်းကိုလည်​​နေ​တော့တာပဲ။ အဲ… အသက်​ကြီးလဲပျက်​စီးစရာအ​ကြောင်းမရှိတဲ့ အ​တော့်​ကိုစွံတဲ့ဖိုးဖိုးပါ။
တကယ်​​တော့ ဒီဖိုးဖိုးကို ခရီးသည်​တဦးက ဦးစား​ပေးထိုင်​ခုံက​နေထပြီး ​ထိုင်​စရာ​နေရာ​ပေးခဲ့တာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ဒီဖိုးဖိုးက​တော့ ရလာ​တဲ့အခွင့်​အ​ရေးတိုင်းကို ​ဂေါ်ဖို့ပဲ​ချောင်း​နေတဲ့ပုံပါ။ သူ့ဆန္ဒပြည့်​ခဲ့ပါတယ်​။
မွေးတှကေို တုနျနခေဈြတတျတဲ့သူ ဖိုးဖိုးဖှားဖှားတှဟော ခဈြမတ်ေတာနဲ့ ပွညျ့ဝတဲ့လူကွီးတှဖွေဈရုံမက တဖကျမှာလညျး လူငယျတှထေကျ ပိုပွီးလနျးပွီးခတျေမီတဲ့ အဂျေါဆုံးဖိုးဖိုးတှလေညျးရှိနပေါတယျ။ စိတျပြိုကိုယျနုဆိုတဲ့စကားအတိုငျး အသကျကွီးလာလဲမပကျြစီးဘဲ စိတျကိုကိုယျပါအပေါ့ပါးဆုံး၊ အလနျးဆနျးဆုံးနဲ့ ဘဝကိုဖွတျသနျးနတေဲ့ ခဈြစရာဖိုးဖိုးတှအေကွောငျး ကွညျ့လိုကျရအောငျလား။
ဒီဖိုးဖိုးက အမူအရာအိုကျတငျမြိုးနဲ့ ဂျေါနတောကိုမွငျတှရေ့တာဆိုတော့ သူဘာမြားလုပျနတေယျ ထငျပါသလဲ? ခဈြစရာဖိုးဖိုးက ဖစျေ့ဘှတျချအကောငျ့ပျေါမှာ တငျဖို့ ဆဲလျဖီဆှဲနတောပါတဲ့ဗြာ။
တလောကလုံး ကွောကျနပေမေဲ့လညျး မကွောကျတတျတဲ့ဖိုးဖိုးက နညျးနညျးမှကျုမတုနျလှုပျပါဘူး။ သူ့အတှကျတော့ ဒီလောကျသညျးထိတျရငျဖို့ဆိုတာ ကလေးကစားလောကျသာဖွဈနပေုံပါ။
လငျးနို့လူသားရုပျရှငျဖွဈတဲ့ Dark Knight Rises ကို ကွညျ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ အဖိုးဖွဈသူဟာ သူ့မွေးဖွဈသူဆီ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဓာတျပုံပါတဲ့။ ခတျေမီပွီး ဂျေါလှနျးတဲ့ဖိုးဖိုးဖွဈပါတယျ။
အခုမွငျနရေတဲ့ ဖိုးဖိုးကတော့ ဒုတိယကမ်ဘာစဈက ဗုံးကွဲလယောဉျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူပါ။ အသကျ ၉၅ ခုနှဈအရှယျအထိ သူက အကွောကျအလနျ့မရှိ လထေဲပြံသနျးနဆေဲဖွဈတာကို အားကဖြှယျမွငျတှရေ့မှာပါ။
ဖိုးဖိုးက ပငျစငျအိမျရာမှာသှားနနေတောလေ။ သူရောကျရောကျခငျြးမှာပဲ မှျောအစှမျးနဲ့မညျသို့မညျပုံလုပျလိုကျသညျမသိ… အနားမှာဝိုငျးဝိုငျးကိုလညျနတေော့တာပဲ။ အဲ… အသကျကွီးလဲပကျြစီးစရာအကွောငျးမရှိတဲ့ အတေျာ့ကိုစှံတဲ့ဖိုးဖိုးပါ။
တကယျတော့ ဒီဖိုးဖိုးကို ခရီးသညျတဦးက ဦးစားပေးထိုငျခုံကနထေပွီး ထိုငျစရာနရောပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီဖိုးဖိုးကတော့ ရလာတဲ့အခှငျ့အရေးတိုငျးကို ဂျေါဖို့ပဲခြောငျးနတေဲ့ပုံပါ။ သူ့ဆန်ဒပွညျ့ခဲ့ပါတယျ။
Funny Collection 1
Funny : All About Alcohol
လာမယ့် Batman ဇာတ်ကားသစ်ထဲမှာ Catwoman အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့် Jason …
ချစ်သူအသစ်စက်စက်ကို လူမြင်ကွင်းမှာ အနမ်းတွေခြွေနေတဲ့ Liam Hemsworth
The Dark Knight ရဲ့ အမြင့်ဆုံးစံချိန်တွေကိုချိုးဖျက်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့ Joker …
Funny Collection V 4
Funny : Kind of Girl
Funny : How to train your …
လာမယ့် Batman ဇာတ်ကားသစ်ထဲမှာ Catwoman အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့် Jason Momoa …
Funny : How to train your cow …
Copyright © 2020 CantWait2Say